Sabti, Dec 19, 2020-Cabdirashiid Janan oo iska fogeeyay eedeyn uga timid dowladda Soomaaliya – LaacibOnline
Sabti, Dec 19, 2020-Cabdirashiid Janan oo iska fogeeyay eedeyn uga timid dowladda Soomaaliya
Sabti, December, 19, 2020 (HOL) -Wasiirka Amniga Dowlad Gobolleedka Jubbaland Cabdirashiid xassan Cabdinuur Janan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeyn uga timid dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maleeshiyaad uu hoggaaminayo lagu tababarayo degmada Mandera ee dalka Kenya.
Wasiirka Wasaarradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa ku eedeeyay dowladda Kenya in ay tababar ku waddo sida uu hadalka u dhiggay maleeshiyaad uu hoggaaminayo Cabdirashiid Janan kuwaa oo doonaya in ay weerar ku soo qaadaan qeybo ka mid ah gobolka Gedo gaar ahaan degmada BeledXaawo.
Cabdirashiid Janan ayaa waxba kama jiraan ku sheegay eedeynta uga timid dowladda Soomaaliya ee ah in uu maleeshiyaad ku uruursanayo degmada Mandera ee dalka Kenya.
Janan ayaa arrintaasi ku gacan seyray waxa uuna sheegay in uu joog duleedka magaalada Beled-xaawo ee gobolka Gedo isla markaana uu halkaasi u joogo sidii uu u difaaci lahaa danta dadka danyarta ah ee uu sheegay in gobolka Gedo ay dowladda federaalka ah ku dhibaataynayso.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan xiriirka u jartay dowladda Kenya oo ku eedeysay in ay fara-galin ba’an ku heyso arrimaha gudaha Soomaalia, laakiin Kenya wey iska diiday eedeyntaas.
← Sabti, Dec 19, 2020-Dhaawacyadii qarixi ismiidaaminta Gaalkacyo oo Muqdisho loo qaaday iyo aas qaran oo loo sameynayo saraakiishii ku geeriyooday qaraxa
Sabti, Dec 19, 2020-Cali Guudlaawe oo kordhiyay mudada uu soo magacaabayo Golaha Wasiirradda Hirshabeelle →
Isniin, Aug 8 , 2020-Madaxweyne Farmaajo oo hakiyey go’aan ay Golaha Wasiirada ku fasixi lahayeen duulimaadyada Qaadka keena
Khamiis, Sept 3 , 2020-Duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe
Arbaco, Dec 2 , 2020-Al-shabaab oo weerar ka geysatay saldhig militari gobolka Shabeellaha Hoose